Home News C/wali gaas oo Digniin Culus loo Jeediyay!!!
C/wali gaas oo Digniin Culus loo Jeediyay!!!
War qoraal ah oo ay soo saareen siyaasiin si weyn looga yaqaano Puntland horeyna u soo qabtay xilal kala duwan oo ay ku jiraan Wasiiro badan ayaa looga hadlay xaaladdihii ugu dambeeyey ee Puntland iyo dibu eegista Arrimaha Dastuurka ee Soomaaliya.
Sidda lagu sheegay Nuqul qoraal ah oo ay heshay Warbaahinta waxay madashan oo la baxday Puntland FOCUS GROUP aad uga hadashay arrimaha ku saabsan welwelka ay ka qabto in Xukuumada Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku fakarayso mudo kororsi mudo xileedkeeda oo ay uga harsan tahay wax ka yar sannad.
1.Cali Xaaji Warsame oo horey u soo noqday Musharax iyo Wasiirkii Waxbarashada & Tacliinta sare ee Xukuumada Gaas.
2.Siciid Cabdullaahi Deni oo horey u soo noqday Musharax M/weyne iyo Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga caalamiga ah dawladda Faderaalka Soomaaliya.
3.Faarax Cali Shire oo horey u soo noqday Wasiirkii maaliyada ee Xukuumadii Faroole.
4.Khaliif Ciise Mudan oo horey u soo noqday Wasiirkii Amniga & DDRta Xukuumadii Faroole.
5.Cabdullaahi Axmed Jaamac (Ilka Jiir) oo horey u soo noqday Musharax iyo Wasiirka Arrimaha gudaha, D/hoose iyo Horumarinta Reer Miyiga Xukuumaddii Faroole.
6.Cabdi Faarax Juxa oo horey u soo noqday Wasiirkii Waxbarashada Xukuumadii Faroole, kuna dambeeyey Wasiirka Arrimaha gudaha DF Soomaaliya ee Xukuumada Kheyre.
7.Isse Maxamuud Faarah oo horey u soo noqday Agaasimaha Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumaddii Faroole, madashana Afhayeen u ah waqtigan.
8.Xaaji Maxamed Yaasiin oo horey musharax ugu noqday Madaxweynimada Soomaaliya, Ganacsade degan Nairobi
9.Dr Maxamed Salaad Qoryooley oo ah Siyaasi
10.Maxamuud Axmed Xasan oo ah Siyaasi